थाहा खबर: यौनिक अल्पसंख्यकका पीडा : दुर्व्यवहारकै कारण याैनलाई पेसा बनाउन बाध्य
पैसामा कुरा नमिल्दा यौन सम्बन्धपछि कुटिन्छन्
हेटौंडा : विगत दुई वर्षदेखि हेटौंडा बस्दै आएकी सिन्धुपाल्चोकको पार्वती क्षत्री (नाम परिवर्तन) जन्मँदा घरको कान्छो छोरा बनेर जन्मिएकी थिइन्।
उनले परिवारमा सधै एक असल छोरीले गर्ने माया र जिम्मेवारी निर्वाह गरिन्। शारीरिक बनावटले पुरुष भए पनि उनको हाउभाउ, बोली व्यवहार र इच्छा भने महिलासँग मिल्थ्यो।
दोहोरो जीवन जिउन कति गाह्रो हुन्छ सायद उनलाई भन्दा राम्रोसँग अरू कसलाई थाहा होला र? २५ वर्षीया पार्वती वर्षमा २/४ पटक घर जान्छिन् पुरुष बनेर। अनि हेटौंडामा यौन पेसा गरेर बस्छिन् एउटा महिला बनेर।
बाँच्नकै लागि काम खोज्न उनी ककसको ढोका ढकढक्याउन पुगिनन् होला? तर सबैले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण उनलाई काम नदिएपछि हाल उनको बिहान बेलुकाको छाक यौनधन्दाबाटै चलिरहेको छ। दिनभरि कामको खोजीमा ढोका ढकढकाउन पुग्दा अनेक अपशब्द बोलेर पठाउनेहरू नै रात परेपछि उनलाई खोज्दै आइपुग्छन्।
नेपाली समाजले दुई वटा लिंगलाई स्विकार गरेको छ - महिला र पुरुष। तीभन्दा आफूलाई फरक महसुस गर्ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समाजले स्विकार गर्न सकेको छैन। स्विकार नगरेको मात्रै होइन समाजले उनीहरूलाई घृणा, तिरस्कार, अपशब्द र दुर्व्यवहार गर्ने गरेको छ।
'आफैं व्यवसाय गरौ भने पनि कोही आउँदैनन् हाम्रोमा यस्तोमा हामी के गरौ?’, उनले भनिन्। थापाले आफूलगायत केही साथीले लैंगिकता र यौनिकतासम्बन्धी प्रोजेक्टमा काम पाएको भए पनि अधिकांश काम नपाएकोले सडकमा पुगेको बताइन्।
पैसाको लालच देखाएर आफ्नौ यौन प्यास मेट्न उनीहरूलाई हेटौंडाबाट टाढा लगेर कतिपटक बीच जंगलमा फालिएका बताउँछिन् सुनिता थापा (नाम परिवर्तित)। ‘केही नभए एक सय रुपैयाँमा त हामी उनीहरूले भनेजस्तो गर्न तयार हुनुपर्छ। झन् कसैले अलि बढी दिन्छु भन्यो भने खुसीसाथ जान्छौं,' थापा भन्छिन्, 'तर आफ्नो प्यास मेटेर गुडिरहेको गाडीबाट फाल्दिने, मध्यरातमा जंगलमा छोड्दिने र ढुंगाले हानेर टाउको फुटाइदिने जस्तो काम धेरैपटक गरेका छन्। जति जे गरे पनि सहेर पछि फर्केर त्यही काम गर्न जानुपर्छ।’
३ जनाले लिंगमा 'अन्य' राखेर नागरिकता लिएका छन् भने एक जनाले पुरुषबाट महिलाको नागरिकता लिएका छन्। अजिता भुजेल, सानु लामा र नेहा मानन्धरले 'अन्य'को नागरिकता लिएका हुन् भने सञ्जिवनी लोप्चनले पुरुषबाट महिलाको नागरिकता पाएकी हुन्।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय आफू राज्यबाट पनि हेलामा परेको बताउँछन्। आफ्नै घरपरिवारबाट पनि हेला सहेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राज्यले पनि उपेक्षा गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘ठूला ठूला भाषण र कार्यक्रममा मात्रै हो सबैलाई समेट्छौं भन्ने तर हामीलाई सरकारले कहिल्यै समेटेन। स्थानीय सरकारले काम गरेको देखाउन मात्रै थोरै बजेट छुुट्याएजस्तो गर्छ। प्रदेश सरकारले त त्यत्रो बजेट ल्याउँदा पनि हामीलाई अटाएन,’ थापाले गुनासो गरिन्।